सरकार, बेपत्ता योद्धालाई तत्काल सार्वजनिक गर ! — Ratopost.com News from Nepal
सरकार, बेपत्ता योद्धालाई तत्काल सार्वजनिक गर !
झनक श्रेष्ठ ‘प्रज्वल’
काठमाडौं । जेठ ७ गते अर्थात् बेपत्ता योद्धा दिवस ।
यो दिवस नेपालमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको सम्झना गर्ने गरिन्छ ।
जेठ ७ गतेलाई बेपत्ता योद्धा दिवस भनिए पनि बेपत्ता योद्धाका परिवारले आफन्त बेपत्ता भएको दिन पारेर सम्मान र सम्झना गर्दै आइरहेका छन् ।
महान् जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन राज्यले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र जनतालाई माओवादीको आरोप लगाई हत्या गर्नुका साथै बेपत्ता बनाएको थियो ।
जनयुद्धकालमा यसरी बेपत्ता पार्ने क्रम २०५४ सालमा कास्कीका फणिन्द्र सिम्खडालाई गिरफ्तार गरेपछि भएको थियो । त्यसपछि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने (शर्मा), पत्रकार मिलन नेपाली, नवीन गौतम, कमला शर्मालाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारेको थियो । यो दिन कालो दिनका रूपमा पनि कुख्यात छ । उनीहरूलाई बेपत्ता बनाएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘दे आर अलरेडी किल्ड’ अर्थात् उनीहरु सबै मरिइसके भनेका थिए ।
जनयुद्धको विकाससँगै शेरबहादुर देउवाको सरकारले देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो । देशैभरि सेना परिचालन भएकाे थियो । माओवादी नेताहरूका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दै टाउकाको मोल तोकेको थियो ।
यही समयमा तत्कालीन राज्यसत्ताले योद्धा तथा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने काम तीव्र पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राज्यले ४ सय जनालाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । यसरी २०५४ सालदेखि २०६३ सालसम्म जोजति प्रधामन्त्री वा राज्यप्रमुख हुन पुगे, उनीहरूका पालामा राज्यद्वारा बेपत्ता पार्ने काम भइराख्यो ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल, विद्यार्थी नेताहरू विपीन भण्डारी, नवीन राईहरूलाई पनि बेपत्ता पारिएको थियो । तत्कालीन शाहीसेनाले भैरवनाथ गणबाट कौशल्या पोखरेल, धीरेन्द्र बस्नेत, निश्चल नकर्मी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलगायत ४९ जनालाई बेपत्ता पारेको थियो ।
जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो, २०६३ पछि जनयुद्धका नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरूले चटक्कै छाडिदिए । उनीहरूले नेपाली क्रान्तिलाई त छाडिदिए नै जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते बनाइएकाहरू र उनीहरूका परिवारलाई पनि छाडिदिए । शान्ति प्रक्रियासँगै प्रचण्ड र बाबुराम सरकारमा पुगिरहेका छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पार्ने मुख्य व्यक्तिका रूपमा कुख्यात राजु बस्नेतलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै बढुवा गरेका थिए ।
प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बाबुराम त अहिले जनयुद्धलाई नै तिरस्कार गर्दै माक्र्सवादको विरोध गर्दै हिँडेका छन् । प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएको पार्टीको अहिले सरकार बनेको छ । एमालेमा विलय भइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र विलय हुँदै गर्दा नै शान्ति प्रक्रियासँगै उनीहरूले छाड्दै गरेको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिमा बचेखुचेको सबै अवशेषहरूलाई खरानी बनाए ।
तत्कालीन जनयुद्धका नायक मानिएका प्रचण्ड, बाबुराम, बादल सत्तामा पुगे पनि बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्थाका बारेमा केही काम नगरेको बेपत्ता योद्धाहरुका परिवारहरुको भनाइ छ । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल संसद्वादमा पतन भए पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरुको सपना पूरा गरेरै छोड्ने उद्घोष गरेको छ ।
यी त राजनीतिक कुरा भए । उनीहरू सत्ताको स्वाद लिने जुन अवस्थामा पुगेका छन्, त्यो हुनुको मुख्य कारण तिनै सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते योद्धा र उनीहरूका परिवारको त्याग र समर्पण थियो । यसरी जनयुद्धमा सहिद भएकाहरूको एक किसिमको पीडा छँदैछ ।
उनीहरूका परिवारको बिचल्ली नै छ । सहिदहरू अब फर्केर आउँदैनन्, सबैले बुझेको कुरा हो तर बेपत्ता भएकाहरूको प्रचण्ड—बाबुरामको यो सत्ताले न सास देखाएको छ, न त लास नै । सास वा लास दुवै नपाउँदा परिवारजनमा मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता पैदा भएको छ ।
आफन्त फर्किन्छन् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो समाएर बसिराखेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक क्षतिको पूर्ति कसले गरिदिने ? यो पक्ष छुट्टै छ । जनयुद्धको अन्त्य घोषणा गरी शान्तिप्रक्रिया हुँदै प्रचण्ड–बाबुराम सत्तासीन भइराख्दा उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा छानबिन आयोग त गठन गरेका छन् तर यो आयोग पूरै एकतर्फी बनेको छ । त्यसले हिजो जनयुद्धमा राज्यद्वारा भएका नरसंहार, ज्यादतीको सही छानबिन नहुने पक्का छ ।